Xafiiska shaqada oo diiday in uu qaabbilo muwaadiniinta EU - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xafiiska shaqada oo diiday in uu qaabbilo muwaadiniinta EU
Publicerat måndag 8 april 2013 kl 13.32
Sawirle: Albin Olsson/Wikipedia
Xafiiska shaqada ayaa muddo dheer soo diidi jirey in uu u qaabbilo dadka shaqa-doonka ay u dhashay dalalka Midowga Yurub si la mid ah muwaadiniinta iswiidhishka ah oo shaqadoonka ah. Taasina waxay ka soo horjeedaa xeerarka degsan. Sidaas awgeed dadkaasi lama geliyo habka isku-aaddinta shaqada ee uu xafiiska shaqadu isticmaalo.
Marka qof shaqa-doon ah oo aan haysan lambarka aqoonsiga iswiidhishka uu yimaado xafiiska shaqada waxaa la weyddiiyaa waxa loo magacaabo lambarka xiriirinta oo ah lambar aqoonsi oo kumeergaar ah oo ay Hay’adda canshuuruhu bixiso. Laakiin mar walba la isma siiyo lambarkaas.
Waxaa sidoo degmooyinka ka jira aqoon-darri ku saabsan sidii loo la dhaqmi lahaa muwaadiniinta Midowga Yurub ee Iswiidhen ku sugan. Sidaas awgeed ayaa hadda la doonayaa in la caddeeyo hababka loo la dhaqmayo marka ay tusaale dadkaasi caawimaad ka codsadaan xafiiska gargaarka bulshada.
Dad badan ayey ku adag tahay in ay ogaadaan in qof xaq u leeyahay in uu Iswiidhen degganaado, taas oo shuruud u ah in qofkaas la siin karo caawimaadda la siiyo muwaadiniinta iswiidhishka ah. Waxyaalaha xafiiska gargaarka bulshadu qiimeynayo waxaa ka mid ah in qofku si firfircoon shaqo u raadinayo iyo in ay macquul tahay in uu heli karo shaqo.